Cute Translator 6.0.1.1226 +Serial Key...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Cute Translator 6.0.1.1226 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးကတော့ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...! ကျွန်တော် ဖိုင်ထဲမှာ ဒီကောင်လေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကို Notepad ဖြင့်ရေးပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်...! 32 Bit & 64 Bit နှစ်ခုလုံးမှာ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်...!
LANGUAGES 53 မျိုးကို Translation လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...!သုံးရတာ အဆင်ပြေအောင်လို့ Serial key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...!
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 756.43KB ပဲရှိပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1 Response to Cute Translator 6.0.1.1226 +Serial Key...!
ခရစ်စ္စမတ်ဘိုးဘိုးလေးကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျာ...:) ကျေးဇူးပါ..သုံးဖို့ယူသွားပါတယ်...:)